Xukun lagu riday dad loo heystay kufsigii iyo dilkii Caaisha Ilyaas |
Xukun lagu riday dad loo heystay kufsigii iyo dilkii Caaisha Ilyaas
Maanta waxaa Maxkamada darajada 1aad ee Gobolka Nugaal la horgeeyey 10 eedeysane oo loo heystay kufsigii iyo dilkii Bishii Feberaayo ee sanadkaan Magalada Gaalkacyo loogu geystay Caaisho Ilyaas Aadan oo aheyd Gabar 12 jir ah.
10 Eedeysane ee maxkamada la horkeenay ayaa kiiskooda waxaa ay Maxkamada qaaday mudo laba jeer ah,waxaana ugu dambeyn Maanta xukun lagu riday saddex Eedeysane halka 7 kale ay Maxkamadu siideysay.
Gudoomiyaha Maxkamada Darajada Koowaad ee dagmada Garowe Shiikh Cabdinuur oo ku dhawaaqay go’aanka Maxkamada ee ku Aadan kiiska Caasho Ilyaas Aadan ayaa sheegay in Cabdifataax Cabdiraxman Warsame, Cabdisalaan Cabdiraxman Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige lagu xukumay dil toogasho halka 7 kale lasiidaayey, kadib markii ay Maxkamadu wax dembi ah ku weysay.
Garsoorku waxa uu sidoo kale sheegay in Xukunka Maanta ay riday Maxkamada Darajada 1aad ee Gobolka Nugaal uu ka furan yahay Racfaan mudo Bil ah.
Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa isha ku hayay kiiskii Caaisho Ilyaas Aadan oo bishii Feberaayo ee sanadkaan 2019 kufsi iyo dil arxandaro ah loogu geystay Magalada Gaalkacyo,hayeeshee Maanta dadkii loo heystay la xukumay